John McCain iyo Kerry oo kulamo la qaatay golaha milatariga ee ka arrimiya dalka Masar – SBC
John McCain iyo Kerry oo kulamo la qaatay golaha milatariga ee ka arrimiya dalka Masar
Posted by editor on June 28, 2011 Comments
Cairo:-Senator John McCain oo katirsan xisbiga jumhuuriga iyo John Kerry oo isna katirsan xisbiga dimuqaraadiga dalka mareykanka oo la kulmay wasiirka gaashaandhiga dalka Masar ahna madaxa golaha sare ee ka arrimiya dalka Masar ayaa sheegay in goluhu diyaar u yahay in xukunka uu ku waeejiyo maamul rayid ah oo la soo doortay sida ugu dhaqsaha badan.
Senator Jogn Kerry ayaa ku nuuxnuuxsaday in hogaanka milatariga Masar ay ku dadaalayaan in ay xukunka ka degaan islamarkaana ay dib ugu laabtaan howlihii ay hayeen.
McCain iyo Kerry ayaa tilmaamay in ay la soo qaadeen hogaanka milatariga in ay ogolaadaan in kormeerayaal caalami ah ay dusha kala socdaan doorashooyinka madaxtinimo ee soo socda.
Sidoo kale Washington waxa ay sheegtay in ay donayso in ay ka caawiso masar xoojinta dhaqaalaha iyo sidii shacabka Masar ay u xaqiijin lahaayeen himilooyinka ay tiigsanayaan.
Golaha milatariga Masar ayaa haya talada dalkaas tan iyo markii uu xilka ka dagay xusni Mubaarak bishii febaraayo ee la soo dhaafay.
Waxaa la filayaa in ay ka qabsoomaan dalka Masar bisha September ee soo socoto doorashooyin barlamaani ah taasi oo gogol xaar u noqon doonto doorashooyinka madaxtinimo ee dhici doonto labo bilood kadib doorashooyinka barlamaaniga.
Diyaar garoow la ‘aanta inta abdan axsaabta iyo dhaqdhaqaaqyada ka curtay kacaankii masar 25 janaayo ayaa waxa ay keentay in ay soo baxaan dalabaad badan oo ku aadan dib u dhigidda doorashooyinka barlamaanka ama dejinta dustuur cusub oo uu yeesho dalka masar.
Wadmada reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in milatariga masar uu sii hayo talada dalka haddii ay dib u dhac ku timaado doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan dalkaas.